Ugogo ubabaza ibhadi 'ngabakugilwe' wumzukulu wakhe - Ilanga News
Home Izindaba Ugogo ubabaza ibhadi ‘ngabakugilwe’ wumzukulu wakhe
Uthi ngeke aphinde akholwe lutho alubona kwiTV
UMinenhle Sithole, ovele ohlelweni, uMnakwethu, njengenkosikazi endala ka-Mduduzi “Dulas” Magubane.
UKHUZA ibhadi abaligilwe yingane yabo ugogo wentokazi ebivele ohlelweni lukamabonakude olumayelana nesithembu, uMnakwethu, ngoMgqibelo odlule esiteshini i-1Magic, nangoLwesibili kuMzansi Magic.
UNkk Gabi Sithole (68), ongugogo kaMinenhle Sithole, ovele kulolu hlelo njengenkosikazi endala kaMduduzi “Dulas” Magubane, obekuvela ukuthi ufuna ukuthatha isithembu, uthi abayazi le mihlola abayigilwe yingane yabo.
Ugogo ubekhuluma ngokukhethekile neLANGA LangeSonto, emzini wakhe osendaweni yakwaMxhosa, KwaMaphumulo, ngoLwesihlanu ntambama.
Ubevakashelwe yileli phephandaba ngemuva kokuba ILANGA, elinguzakwabo weLangeSonto libike ukuthi uDulas, ongumculi kamasikandi, uthi ubelingisa kulolu hlelo.
UDulas utshele ILANGA ukuthi nalaba besifazane abevele nabo akathandani nabo.
UNkk Sithole ukuqinisekisile kwiLANGA LangeSonto ukuthi impela uDulas akathandani nalaba besifazane.
“UDulas, uNosihle (lo obevelile naye kwiTV, obekuthiwa nguMa-Mhlongo) noMinenhle (obekuthiwa nguMaDlamini, umamkhulu) bangabangani bonke laba bantu, kusukela kudala. Kusimangaze kakhulu ukubabona kwiTV sebevela njengabantu abalobolene,” kusho ugogo.
Ukhale ngeshwa umzukulu wakhe abafakela lona, waphinda wakhala nangokuthi ubafakela amehlo abantu ngalo mhlola awenzile, ekubeni bewumndeni ohloniphekile futhi ohlonishwayo endaweni.
“Mina ngeke ngisayikholwa into engiyibona kwiTV ngoba kusho ukuthi kudlalwa ngathi. Lezi zingane zihambe ziya eGoli zonke ziyofuna amatoho. U-Dulas yena siyamazi uyacula futhi ungumngani omkhulu walaba bobabili, kuyethusa uma sebesiphica kanjena,” kusho ugogo.
Uphinde watshela ILANGA LangeSonto ukuthi kungamampunge ukuthi uMinenhle unezingane ezimbili, kodwa unengane eyodwa futhi uyise bayamazi, akusiyena uDulas.
“Konke nje esikubonile ngomzukulu kungamanga. Kusho ukuthi ubezizamela imali nje le athi uyoyizama eGoli,” kusho ugogo.
Uqhube wathi uke wakuveza uMinenhle kodadewabo ukuthi kukhona into alingisa kuyona noMseleku, azovela kuyona ku-tv, kodwa uthi bebengazi ukuthi ubesho lo mhlola.
Ngesikhathi ludlala uhlelo, ugogo uthi ubelubuka, nokuyilapho ezitshele khona ukuthi ngeke aphinde akholwe lutho edlala kwiTV.
Utshele leli phephandaba ukuthi basalinde uMinenhle ukuba abachazele kahle ngalo mhlola.
“Akakaze akhulume nami selokhu evelile kwiTV, futhi nami ngeke ngimbuze lutho kuze kuba uyakhuluma yena. Ngifuna ukwazi ukuthi uthole malini ngale nto abeyenza. Uma ikhona (imali ayitholile) kumele asinike nathi ngoba singene ehlazweni sonke siwumndeni. Mina bengithi bayasebenza eGoli, bengingazi ukuthi bagila le mikhuba,” esho.
Echazela leli phephandaba, ugogo uthe uMinenhle akasenaye unina, ukhuliswe nguyena kwaSithole yikomalume bakhe.
Uthe selokhu bamgcina ngoMasingana (January) esuka khona ekhaya KwaMaphumulo, eya eGoli, njengoba kwiTV eveze ukuthi wafika ngo-2014.
Ethintwa yiLANGA LangeSonto uDulas, wale waphetha ukukhuluma ngale ndaba, wathi akasakhulumi nezintatheli. Wenqabile futhi ukuxhumanisa intatheli nalaba besifazane avele nabo ohlelweni.
UMusa Mseleku, owethula lolu hlelo, ephendula odabeni lwe-LANGA , uthe yena ungumethuli wohlelo kuphela, okunye okungale kwalokho, okuhlanganisa nocwaningo ngabasuke bezovela, akahlangani nakho.
Previous articleUsolwa ngokuzenza uNyazilwezulu
Next articleUbunzima obubhekene neSundowns kwiCaf